माघ ८, २०७८ ०५:५३:५१
उत्सव चौलागाईंको कविता : ऊ कुनै अपराधी हैन जेठ १५, २०७८
प्रधानमन्त्री ज्यु लाई खुल्ला पत्र बैशाख २६, २०७७
मेयर साव, हेटौंडाका जनताको भने १२ नबजोस है ! चैत्र ५, २०७६
गर्भवती श्रीमतीसंग यौन सम्पर्क राख्नुस् , श्रीमती तृप्त हुन्छिन् गर्भवती महिलाहरु पेटमा बच्चा बसेको समयमा निकै सावधानी अपनाउछन् । त्यस्तो अवस्थामा सामान्य चोट लाग्दा पनि बच्चा खेर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण महिलाहरु विषेश सावधानी अपनाउन चाहन्छन् । त्यहि कारण हुनसक्छ अधिकांश महिला एवं पुरुषहरु गर्भवती रहेको समयमा यौन सम्पर्क राख्न चाहदैनन् । कतिले यो पनि भन्छन् महिला गर्भवती भएको तीन महिनापछि यौन सम्पर्क गर्नु हुन्न । तर, मेडिकल साइन्स उक्त मान्यतासंग सहमत छैन । चिकित्सकका अनुसार गर्भवती भएको बेला महिलाको शरीरमा हर्मोनहरु अद चैत्र १, २०७६
यसरी याैन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहदैन यौन मानवीय र जिवित प्राणीको नैसंर्गीक आवश्यकता नै हो । मानिसलाई खानपानको जरुरी भएजस्तै सेक्सको पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्यकता पर्छ । तर सेक्सका पनि चरण र प्रक्रियाहरु हुन्छन् । विबाहिताले गर्ने सेक्स र अविवाहिताले गर्ने सेक्समा जोखिम र चुनौताहरु उत्तिकै मात्रामा अघि पछि हुन्छन् । सेक्समा रोमान्स र आनन्दको कुरा त छँदैछ । यससँगै सेक्स गर्दा गर्भ रहन नरहने तरिका अधिकांशको मनमा उब्जिने कुरा हो । गर्भ राख्नु भनेको धेरै कुराको तालमेल मिलाउन सक्नु पनि हो । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ, तर कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म पनि गर्व नरहन सक्छ । माघ १९, २०७६
तपाईलाई थाहा छ ? यौन सम्पर्कका बेला महिलाहरुले यी १५ कुरा सोच्छन् मानव जिवनको लागि यौन महत्वपूर्ण पाटो हो । यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । यस विषयमा धेरै अध्ययन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यौन विज्ञको सहभागितामा ७०० महिलामा गरिएको अध्यनबाट महिलाहरुले यौन सम्बन्धको बेला के सोंच्छन् भन्ने तथ्य बाहिर आएको हो । माघ १७, २०७६
के विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ ? बुझी राखौं विशेष परिस्थितिवश वा दुवैको सहमतिमा यौन सम्पर्क राख्न नसकिने भने होइन।मानिसमा कौतुहलता हुन्छ। ऊ नयाँ अनुभव सँगाल्न चाहन्छ। यस क्रममा पहिलो पटकको यौन सम्पर्क आफ्नो प्रेमिका, चिने जानेका वा व्यावसायिक यौनकर्मीसँग हुनसक्छ।उचित यौन शिक्षा एवं प्रजनन अंगको विस्तृत जानकारीको अभावमा पहिलो पटकको यौन सम्पर्क धेरैजसोका लागि त्यति सफल र सुखदायी हुँदैन। नेपालमा धेरैजसोले विवाहपछि मात्र यौन सम्पर्क स्थापित गर्दछन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट प्रस्ट भएको छ। तथापि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा उच्च शिक्षासँगै विवाहपूर्व यौन सम्बन्ध राख्नेको संख्या बढेको छ। त्यसैले पहिलो यौन सम्पर्क र सुहागरात (मधुरात्रि) को यौन सम्पर्क अलिकति फरक छ। माघ १०, २०७६
कसिलो र आकर्षक स्तन यसरी बन्छ सबै महिलामा स्तन कसिलो होस् भन्ने चाहना हुन्छ । यौन आकर्षणको सन्दर्भमा कस्तो शरीरलाई विशेष गरी यौन आकर्षक मानिन्छ भन्ने बारेमा केही चर्चा गरौं। पुष ९, २०७६
यवतीहरु कसरी प्रयोग गर्छन स्त्री क’ण्डम काठमाडौं–सामान्य रुपमा हेर्दा स्त्री कण्डमलाई सुखभोग गर्नुभन्दा केहि समय अगाडि लगाउनु पर्दछ । पुष ९, २०७६
सेक्सका लागि अँधेरो नै किन रोजिन्छ ? सामान्यतः प्रेमका मीठा पलहरुको मजा पुरुषहरु आफ्नो पार्टनरको आँखामा आँखा जुधाएर लिन मन पराउँछन् । पुष ८, २०७६
नियमित स्तन माड्दा महिलालाई हुन्छ यस्ता अनौठो फाइदा काठमाडौं–महिलाहरुले आफुलाई फिट राख्नको लागि अनेक मेहनत गर्छन । पुष ८, २०७६
के मृत्यु भनेको पात खसेको जस्तै मात्रै हो त ? जीवन र मृत्युको बारेमा अनेकौं अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् । पुष ८, २०७६
थाहा पाउनुहोस् ब्रेकअपका ९ फाइदा गै जिउनेसँगै मर्ने बाचा खाएका पतिपत्नीबीच पनि मतभेद हुन्छ। मतभेद मात्र होइन सम्बन्धमा यतिसम्म समस्या आउँछ कि ब्रेकअफ नै हुन पुग्छ। पुष ८, २०७६
भर्जिनिटी (कुमारित्व ) गुमाउने सही उमेर कुन हो ? किशोर अवस्थामा आउने शारीरिक परिवर्तन पछि धेरै किशोरकिशारीहरुमा यौनप्रति आर्कषण बढ्ने गर्दछ । पुष ७, २०७६
यी हुन् निमको पातका ८ फाइदा निम बहुउपयोगी वृक्ष हो। पुष ६, २०७६
कानभित्रको फोहोर निकाल्ने ४ घरेलु तरिका कान हाम्रो शरिरको अत्यन्त संवेदनशील अंग हो । कानलाई सफा राख्नुपर्छ । कानमा मैलो जम्नु र कानेगुजी उत्पन्न हुनु सामान्य कुरा हो । फोहोर जम्ने ठाउँलाई हामी इयरबक्स पनि भन्ने गर्छौं । हामीले घरेलु तरिका अपनाएर कान भित्र रहेका फोहोरहरु तथा कानेगुजी सफा पार्न सक्छौं । पुष ४, २०७६